मनमोहक मानहुँकोट : घुम्न जानुस् तर, झुक्किएला ! - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
२०७७ कार्तिक, १८ मंगलवार
तनहुँको सदरमुकाम दमौली नजीकै रहेको मानहुँकोट हिजोसम्म कसैसँग परिचित थिएन ।
कुनै समय बत्तीमुनिको अँध्यारो भनिन्थ्यो । दमौलीबाट करीब आठ किलोमिटर दूरीमा दुई घण्टा पैदल हिँडेर पुगिन्थ्यो ।
मानहुँकोटमा सूर्योदय हेर्नका लागि दैनिक एक हजार पर्यटक पुग्छन् ।
पत्याउनुस् नपत्याउनुस् फेसबुक, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्दै गएपछि यसरी मानहुँकोटमा बिहानै आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको हो । अब त राति मानहुँकोटमै बास बस्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहने गरेको छ । घुमन्ते झुक्किन्छन् त्यहाँ पुगेपछि र भन्छन् अहो अझै लोभलाग्दो सुन्दर रहेछ यो त !
चितवनका मनिष थापाले सामाजिक सञ्जालमा एकदमै चर्चा भएपछि बिहानै मानहुँकोट आइपुगेको बताए । “बिहानको समयमा सूर्योदय र कुहिरोको दृश्यले मनै लोभ्याउँछ”, उनले भने,“मानहुँकोट साँच्चिकै मनमोहक रहेछ ।” पोखरा र चितवनको बीच भागमा रहेको र राजमार्गबाट पनि नजिक भएकाले मानहुँकोटको भविष्य उज्ज्वल रहेको थापाले बताए ।
चितवनबाटै आइपुगेका विनेश थापाले मानहुँकोटबाट बिहानको समयमा देखिने दृश्य सुन्दर र मनमोहक रहेको बताए । “भिडियोमा मात्रै देखेकोभन्दा आफ्नै आँखाले हेरेपछि अझ मोहित भएँ”, उनले भने, “सामाजिक सञ्जालमा यसको जति चर्चा छ, त्यति नै आकर्षणयुक्त रहेछ यो ठाउँ ।”
कसरी पुग्ने मानहुँकोट ?
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ स्थित पर्ने मानहुँडाँडा तपाई काठमाडौं, पोखरा वा चितवन जताबाट पनि दमौली पुग्नुपर्ने हुन्छ । दमौली बजार पुगेपछि करिब ३० मिनेटको सवारी दुरीमा सजिलै मानहुँडाँडा पुग्न सकिन्छ । समुद्र सतहदेखि करिब ११ सय मिटर उचाईमा छ ।
सदरमुकामबाट नजीकै रहेर पनि ओझेल थियो । तर, अहिले भने पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बन्दै गएको छ । अहिले पैदल हिँड्नु पर्दैन । सवारी साधनबाट करीब २५, ३० मिनेटमै पुग्न सकिन्छ । एक किलोमिटर बाटो कालोपत्र भइसकेको यस ठाउँमा कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ ।
किन जाने मानहुँकोट, केके देखिन्छ ?
मानहुँकोटबाट दमौली छर्लङ्ग देखिन्छ । घुमन्तेको मनै लोभ्याउँछ । सामान्यत शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिन अत्यधिक भीड हुन्छ । तर, अहिले कोरोनाको कहरबाट वाक्क दिक्क भएर रिफे्रस हुन पनि आउँछन् ।
लोभलाग्दो दमौली बजार र हिमालका शृङ्खलाहरु निर्घात हेर्न पाइन्छ । दमौली बजार आसपासका क्षेत्र जाडोयाममा झोप्पिने कुहिरोले अझै बढि आनन्त घुमन्तेलाई दिन्छ । माछापुछ्रे, अन्नपूर्ण लगायतका हिमशृङ्खला साथै सदरमुकाम दमौली बजार, मादी नदी, साँगे खोला, तनहुँ जलविद्युत्को ड्याम निर्माण स्थल एवं मनोरम दृश्यहरु देख्न सकिन्छ ।
न्यानो घाम र बिहान सूर्योदय र बेलुकाको अस्ताउँदो सूर्य आँखा नजीकबाट नियाल्न पाइने । घोप्टिएको हिमाल तथा समथर फाँट, नदीनाला ।
विविध र्सस्कृति प्राकृतिक रमणिय स्थल विशेषतः यो मगर समुदायको बसोबास रहेको क्षेत्र छ । मगर समु्दायको संस्कृति यो ठाउँको अर्को आकर्षण हो ।
अझै चण्डीपूर्णिमाको अवसरमा कौराहा उत्सव हुन्छ । समुद्री सतहदेखि एक हजार १०० मिटर उचाइमा रहेको मानहुँकोट भ्युटावर बनाउनै ३० लाख खर्चेको छ ।
नगरपालिकाले मानहुँकोटमा केबुलकार सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसमेत थालेको छ ।
व्यास नगरपालिका–५ वडाध्यक्ष मोहनकुमार श्रेष्ठ भन्छन् :
पछिल्लो एक हप्ताको अवधिमा मानहुँकोटमा पर्यटकको घुइँचो बढेको छ । दैनिक करिब एक हजार पर्यटक मानहुँकोट आएका छन् । सञ्चारमाध्यमबाट मानहुँकोटको प्रचारप्रसारमा महत्वपूर्ण सहयोग मिलेको छ ।”
व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने :
मानहुँकोटको प्रचारप्रसारका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट पहल भइरहेको भइरहेको छ । “मानहुँको पर्यटनले एउटा गति लिइसकेको छ, यसको विकासका लागि थप योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।
३६ लाख ५० हजारको लागतमा दृश्यावलोकन स्तम्भ
# घुमफिर # मनाहुँकोट
घुमफिरः बँदेल, हरिण, मृगसहित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा देखिएका दृश्यहरु
घुमफिर: आहा ! डोल्पाको फोक्सुण्डो ताल